Tsika Floor jack Vagadziri & pasi pekutapudza jack yekutengesa | EPONT Jack
Imba > Zvigadzirwa > Pasi jack
Ive neshuwa yekutora seti yerudzi rwonzi raranger rargen star Usambofa wakashanda mumotokari yakasimudzwa pasina iyo yakakora jack inomira munzvimbo.
Iyo Ruggedly Crafted RFJ-3TQP ndeyekuchinja kwezvinhu-zvinokatyamadza ne3-ton kusimudza kugona. Kuvakwa kwesimbi Kana iwe ukasimudza netsaona mota inorema kwazvo yeiyo jack, haizombofi yakaparara pauri nekuparadza zuva rako. Hydraulocs muvhu jack ichaburuka zvinyoro-nyoro. Sezvo iwe usingaendi pasi pemotokari isina kuchengetedzwa pajack inomira, kuchengeteka kwako pachako uye kuchengetedzwa kwezvinhu zvako hakufanirwe kumbobvira kwaita mubvunzo, kunyangwe iwe ukatadza kudzora jack.